Alibaba သည် Youku မှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည် – Pandaily
Alibaba သည် Youku မှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည်
Jan 19, 2022, 16:06ညနေ 2022/01/19 23:35:05 Pandaily
အင်္ဂါ နေ့တွင် Youku သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Beijing) Co., Ltd.စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ပို င်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း အပြောင်းအလဲ များ ကိုကိုင်တွယ် ပါအပြောင်းအလဲ နှင့်အတူ Alibaba Culture Entertainment Co., Ltd. သည် ကုမ္ပဏီမှ နုတ် ထွက်ပြီး ရှန်ဟိုင်း Quantudou Network Technology Co., Ltd. ၏ အစုရှယ်ယာ ၁၀၀% ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Alibaba သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်မှ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်အထိ ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ များ ကိုပိုင်ဆိုင် ထားကြောင်း Sky Eye Inquiry Platform ကဖော်ပြသည်။
Youku သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Beijing) Co., Ltd. သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဗီဒီယို ဝေမျှ ရေး ဝက်ဘ်ဆိုက် Youku ၏ အော်ပရေတာ ဖြစ်သည်။ ယင္း အေျပာင္းအလဲ သည္ ယခုအခါ အလီ ဘာ ဘာ သည္ ပိုင္ဆိုင္ မႈ ေျပာင္းလဲ သြားၿပီး ကုမၸဏီ တြင္ သြယ္ ၀ိ ုက္ ေသာ နည္းျဖင့္ ရွယ္ယာ မ်ား
Youku သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Beijing) Co., Ltd. ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် Li Wei နှင့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထားသည့် ယွမ်သန်း ၆၀ ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာ အသစ် ဖြစ်သော Shanghai Quantudou Network Technology Co., Ltd. ကို ၂၀၀၄၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း ၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် မှာ လီ ဝေ ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး မှာ ယွမ်သန်း ၇၀ ဖြစ်သည်။
သတိပြု သင့် သည်မှာ Shanghai Quantudou Network Technology Co., Ltd. သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဗီဒီယို ဝေမျှ သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် Tudou.com ၏ အစောဆုံး မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် Alibaba မှ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Alibaba သည် Youku ရုပ်ရှင် များတွင် အစုရှယ်ယာ ၁၀၀% ကိုဝယ်ယူ ခဲ့သည်
Alibaba ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း ၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် မှာ Li Wei ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး ယွမ်သန်း ၅၀၀ ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ တွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း ၁၇ ခုရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် Youku နှင့် Tudou တို့သည် တရားဝင် ပေါင်းစည်း ခဲ့ပြီး Youku Tudou ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် Youku Potato သည်၎င်း၏ အမည်ကို Unity Group သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် Alibaba Group နှင့် Youku Potato တို့သည် Alibaba သည် Youku Potato ကိုဝယ်ယူ လိမ့်မည်ဟု ပူးတွဲ ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် April ပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် Youku နှင့် Tudou တို့ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဖြစ် တရားဝင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဖြစ် တရားဝင် Alibaba Group ၏လက် အောက်ခံ အဖြစ် တရားဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Tags Alibaba | Chinese technology companies | entertainment industry | youku
Industry Jan 19 ဇန်နဝါရီ 19, 2022
अलीबाबा Youku से बाहर निकलता है, सहायक कंपनी पूरी तस्वीर लेती है
Youku सूचना प्रौद्योगिकी (बीजिंग) कं, लिमिटेड ने उद्योग और वाणिज्य के लिए प्रशासन में पंजीकरण परिवर्तन किए।
ਅਲੀਬਾਬਾ ਨੇ ਯੂਕੂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ.
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੂਕੁਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਬੀਜਿੰਗ) ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ.
আলিবাবা ইউকু থেকে প্রত্যাহার করে নেয়, এবং সহায়ক সংস্থা পূর্ণ ছবি মটরশুটি লাঠি গ্রহণ করে।
ইউকু ইনফরমেশন টেকনোলজি (বেইজিং) কোং লিমিটেড, শিল্প ও বাণিজ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধন পরিবর্তন করেছে।